u-De Kock uphume amasonto amabili kuyela kwamane elimele isihlakala
I-wicketkeeper batsman yama-Standard Bank Proteas, u-Quinton de Kock, osekhishiwe kwimidlalo esele ye-Momentum One-Day International (ODI) series kanye ne-T20 International series bedlala ne-India ngoba elimele isihlakala. u-De Kock ulimale kumdlalo wesibili we-ODI bedlala ne-India e-SuperSport Park ngeSonto, futhi uzodinga amasonto amabili kuyela kwamane ukuze alulame.
i-Team Manager yama-Proteas, u-Dr Mohammed Moosajee uchaze ukulimala: “u-Quinton washayeka kakhulu kwisihlakala sesandla sokunxele ngesikhathi eshaya kumdlalo wesibili we-ODI ngeSonto futhi uzwe ubuhlungu obukhulu kanye nokungakhululeki. Uma esebhekwa futhi kutholakale ukuvuvukala kwi-tendon yesihlakala. Loluhlobo lokulimala luzodinga amasonto amabili kuyela kwamane ukuthi kuphole, lokhu kumukhipha kwimidlalo esele yama-ODI kanye ne-T20 series bedlala ne-India. Abazokulapha be-Cricket South Africa bazozama ukuthi alungele i-Test series bedlala ne-Australia ezoqala ngenyanga ezayo.”
Abakhethayo angeke bamukhombe ozongena endaweni ka-De Kock eqenjini.
Ama-spinners e-India akhipha ama-Proteas babahlule kakhulu u-Markram ufakwe njengokapteni kuze kuphele i-ODI series uKohli uhole umjaho we-India ngekhulu elihle Ama-Proteas ahlosa ukulinganisa iso elilodwa libheke i-World Cup uDuminy ulindele enye i-ODI Series enomqhudelwano u-De Villiers uphumile kuma-Momentum ODI amathathu ngokulimala umunwe Ubuqhawe buka-Amla kubeka ama-Proteas ngaphambili kancane uNgidi no-Zondo babaliwe kwiqembu lama-Proteas lama-ODI Ama-Proteas akhipha i-India kalula kwi-surface ehlolayo u-Du Plessis udumisa ‘okukhethekile’ kumdlalo wama-Proteas Amabutho abangayo u-Kohli no-De Villiers baphakathi nendawo kwisiteji